रोचक : हवाई जहाज चढ्नासाथ मोबाइल किन फ्लाइट मोडमा राखिन्छ ? – Pahilo Update
रोचक : हवाई जहाज चढ्नासाथ मोबाइल किन फ्लाइट मोडमा राखिन्छ ?
काठमाडौं, ०९ चैत । हवाई जहाजमा चढ्नासाथ मोबाइललाई एयरप्लेन वा फ्लाइट मोडमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईं हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर के तपाईंलाई थाहा छ, यस्तो बेला मोबाइललाई फ्लाइट मोडमा राख्नु किन अनिवार्य हुन्छ ? जब प्लेन हावामा टेक अफ लिन्छ, तब पाइलटलाई तल जमिनमा रहेका टावरसँग सञ्चार गर्न सिग्नल प्राप्त हुन्छ ।
सुर्य थापाले भने: प्रचण्डको मानसिक अवस्था ठिक छैन
विप्लवप्रति लक्षित गर्दै राम कार्कीले भने,‘क्रान्तिको बाटो स्पष्ट गर्नुस् अहिल्यैं आउन तयार छु’
लेखराजको नेमप्लेट हटाएपछि कैलालीमा एमालेका दुई समूहबीच झडप
यौ´न सन्तु´ष्टिको आधारमा मोटि युवती ठि´क कि पातली ?
मेरो बुढीको गो´प्य अ´ङ्गको फोटो त्यो मानिसको मोबाईलमा कसरी गयो,भेटियो थुप्रै प्रमाण